I-Udloti Holiday Resort 208 - I-Airbnb
I-Udloti Holiday Resort 208
Leli fulethi lesimanje elisanda kulungiswa lilungele uhambo lwebhizinisi noma ukuvakasha kwamaholide. Isenhliziyweni ye-Udloti futhi ngaphesheya komgwaqo ukusuka olwandle ... nezitolo zokudlela, izitolo zekhofi & ibha emnyango wakho... awukwazanga ukuhleleka kangcono!! Uhambo lwemizuzu engu-8 nje ukusuka e-King Shaka International Airport nemizuzu engu-10 ukusuka e-Gateway Shopping Centre
Leli fulethi elinefenisha enhle, elisanda kulungiswa, efulethini elinekamelo lokulala elilodwa linekhishi elivulekile elinekhishi elinomshini wokuwasha nokomisa i-umble. Ama-air conditioner asekamelweni lokulala nasendaweni yokuphumula ukuze athokomale phakathi nalezo zinsuku zasehlobo ezishisayo. Ikamelo lokulala elivulekile linikeza umbhede omkhulu futhi kukhona usofa olala abantu ababili ontofontofo endaweni yokuphumula.
Ifulethi linikeza i-inthanethi YE-WIFI yamahhala kumuntu webhizinisi odinga ukusebenza kanye ne-smart TV enokufinyelela kwe-Netflix & DSTV. Kukhona indawo yokupaka yamahhala evikelekile ngaphakathi
kwesakhiwo Kunezindawo ezingu-2 ezinhle zokubuka ulwandle izindawo zokubhukuda kanye nendawo ye-Braai elungele ukuzijabulisa komndeni.
I-Udloti ucezu oluncane lwepharadesi.
Kukhona inyama yasemapulazini, isitolo sotshwala, indawo yokuwasha izingubo, amakhemisi, udokotela, ukudla kwasolwandle, isitolo sekhofi kanye ne-Steers phansi.
I-Java Café nayo iphansi inikeza isidlo sasekuseni esihle esibheke olwandle. Umnyango olandelayo we-Java yi-Bel Punto ne-Mundo Vida Restaurants okuyizindawo zokudlela zezinga lomhlaba.
I-Bush Tavern yi-pub/ indawo yokudlela enobungane yasendaweni.
Engikuthanda kakhulu, okuncane okuhamba emgwaqweni, yi-Sandbar... ungaphuthelwa uma ungumthandi we-sushi futhi baphinde banikeze i-cocktail ye-Pina Colada engcono kakhulu! I-Tasca yabathandi be-Pizza, iseduze kakhulu. Zombili ziwela emgwaqweni ukusuka ebhishi nendawo yokubhukuda ehlanzekile
Ngihlala edolobheni elincane elifanayo futhi ngitholakala lapho ngidingeka.